maaha gorgor ee waa xuur
Saturday September 28, 2019 - 08:11:12 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Ugu horrayn waxaan salaamayaa Burcoonline, kadib waxaan kahadlayaa wax gorgor lagu sheegay oo layidhi waxaa lagasoo qabtay deegaanka oog ee gobolka Saraar laguna soo bandhigay Burcoonline, burcoonline-na ay kasoo xigatey Bulshotv.
Horta sawirka lasoo bandhigay maaha Gorgor, galaydh, Dafto iyo Baqalye midna. Waa Xuur miskiina oo aan aaminsanahay in laysugu daray dil iyo been abuur.
Sada layaqaano Xuurtu kama tirsana bahda haadda aan kor kusoo xusnay ee hawada ka ugaadhsada ee waa haad dhulka oo keliya ka ugaadhasada oo afkeeda dheer wixii ay la gaadho intay ku qabato toos u leqda, laakiin ciddiyaha iyo afka midna wax kuma googoosato.
Ninkii haadka iyo dabeecadihiisa kala yaqaan wuu garan karayaa hadalka ninkan leh haadbaa isoo weeraray in wax badani ka qaldanyihiin sida:
11 bay ahaayeen oo mid qudhaa igusoo degey inta kalena waa idulweehanaysey.
Anoo gacan bahalkii iskaga haya ayaan toogtey (bastooladna muusidane qori buu sitey ee garo)
Ugu dambayn aniga way ii caddahay in arrintani tahay qalad. Waxaanse soo jeedinayaa cidda masuulka ka ah xayaawaanka iyo duurjoogta arrinkaa ha udhabba galeen, ninkaana hadduu qalad ka galay naflayda aan dhibka lahayn waa in lagula xisaabtamaa. Sidoo kale weriyayaasha wax kasta gorgor iskaga sheegayaa hayska hubsadeen aqoonna hawyeesheen waxay bulshada lawadaagayaan.